SJSZ65 PVC panel isilingi extrusion kumatshini - China Qingdao Suke Machinery
PVC busebenze Panel extrusion Machine -Suke Machinery
inkampani sethu abasebenzisanayo neeyunivesithi ezininzi ukuphuhlisa umatshini yeplastiki ifuneka ngokungxamisekileyo. Kwakhona ngokubamba ngobuchwepheshe ukusuka kwamanye amazwe ukuphumeza injongo Ukubonelela umatshini epheleleyo kunye nobugcisa.
I PVC Uphahla yenziwa yi PVC kunye ezithile nezongezelelo. Ubukhulu becala kusetyenziswa ekhitshini kunye washroom pops up. It has iimpawu ubunzima ukukhanya, ukufuma-ubungqina, ukugcina ubushushu ubushushu kwaye akukho lula emlilweni, ukufunxa uthuli, kodwa kulula ukupeyinta, ukufaka.
1. Screw Machine Ukondliwa
3. extrusion Ikubumbe
4. Ukubumba Machine
Machine Auxiliary for Option
1. SWP360 isityumzi
2. 200/500 Umxhubi
3. Film wokulaminetha Machine
Kuye avavanyelwe amaxesha amaninzi, ngoko ke liye iingenelo zokonga amandla kunye eziphathekayo, nokwandisa ukusebenza inzuzo ngokwamkela zobuchwepheshe phambili. Imveliso ye PVC kumatshini yophahla na egudileyo, mhle, kwaye akukho ivumba imbi, ngaphandle kokuba akukho lula ukuba aphume imilo.
Kukho iindlela ezininzi PVC yophahla, ezifana assortments amhlophe njengamasi, cream umbala, oluhlaza asidi, kunye neepateni intyatyambo, parquet, uqalo wepesika ezintle. Kwaye ke, iipateni kunye imibala ye PVC yophahla zenziwa ngokweemfuno zabathengi '.
PVC isilingi, PVC panel, panel PVC udonga
UkuKhanya umzimba nofakelo lula
10cm / 16cm / 18cm / esiyi-20 cm / kwi25 / 30cm / 60cm
5.8m / 5.95m / njengoko iimfuno zabathengi '
Printing, hot-sokunyathela, ushicilelo ngeperlite, peritoneal, eqhelekileyo ecwebezelayo, phezulu ziyakhazimla
imibala ezahlukahlukeneyo ukuba ukhetha
(1) Shwabanisa High umphezulu, agudileyo ngaphandle abana xa concatenated
(2) engangenwa, ukufuma-ubungqina, ulisebenzisa-ubungqina, manzi, msindo, isandi abaninzi, ukukhanya ubunzima kunye nofakelo lula
(3) Kuba isilingi nasezindongeni
(4) eyahlukahlukeneyo imibala neepatheni
umphezulu Iflethi okanye emseleni eliphakathi
Previous: SJSZ51 PVC panel yophahla machine extrusion
Okulandelayo: SJSZ80 PVC panel yophahla machine extrusion
Kucingo olubiyele PVC Profile extrusion Machine
SJSZ80 PVC umhombiso udonga machine ibhodi extrusion
SJSZ51 PVC panel yophahla machine extrusion